ဆီးချိရောဂါ – My Doctor
You are here:Home-All Articles-အထွေထွေရောဂါများ-ဆီးချိရောဂါ
By tayzar|2018-08-11T09:40:05+00:00August 11th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများ သွားနှုတ်သင့် မနှုတ်သင့် ဒီနိုင်ငံမှာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဟာ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါတစ်ခုဖြစ်သလို ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်အများစုကြောက်တတ်တာဟာလည်း သွားနှုတ်ရမှာကိုပါပဲ။ အကြောင်းက ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိနေရင် အနာမကျက်တတ်ဘူး သိထားကြတာ တစ်ကြောင်း၊ အရပ်ထဲမှာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိရင် သွားမနှုတ်ရဘူး အချင်းချင်းပြောဆို သတင်းပေးနေကြတာတစ်ကြောင်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သွားနှုတ်ရမှာ ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်တွေဟာ တကယ်ပဲ သွားနှုတ်လို့မရဘူးလား…? လို့မေးရင် သွားနှုတ်လို့ရပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းထားနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မရှိဘဲ ပျော်ပျော်ကြီးကို သွားနှုတ်လို့ရပါတယ်။ နှုတ်သင့်တယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဒီနိုင်ငံမှာ အများစုက ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှိမှန်းမသိဘဲ ပုံမှန်မစစ်ဆေးကြည့်ဘဲ သွားဆရာဝန်ကို ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါမရှိပါဘူး ပြောပြီးသွားနှုတ်ခံတဲ့သူတွေလည်း ထုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဆီးချိုသွေးချိုကြောင့် သွားနှုတ်ထားတဲ့နေရာဟာ အနာမကျက်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တစ်ချို့က သွားအခြေအနေအရမ်းဆိုးလို့
Are you at risk of Diabetes Mellitus?
By tayzar|2018-07-20T15:10:37+00:00July 20th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
သင်ဟာဆီးချို ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသူလား? ဆီးချိုရောဂါဆိုတာ မကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး နာတာရှည်ရောဂါတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာအလွန်တရာမြင့်မားလျက်ရှိပြီး ဆီးချို ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောက်စရာရောဂါများကိုခံစားနေရသူများလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါကို အကြမ်းအားဖြင့် အမျိုးအစား ၁ နဲ့ ၂ ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။အမျိုးအစား ၁ ကတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေမှာအဖြစ်များပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်တုံ့ပြန်မှုမှားယွင်းတာကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကာကွယ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။အမျိုးအစား ၂ ကတော့ ရောဂါဖြစ်ဖို့အစပျိုးချိန်ကြာမြင့်တတ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောဂါပီပြင်လာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးအစား ၂ ကို ဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်မှုတွေကဖြစ်စေသလဲ ဘယ်လိုလူတွေပိုဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာ အဓိကအားဖြင့်ပြောပြလိုပါတယ်။ (၁)အသက်အရွယ် အများအားဖြင့်ဆီးချိုဟာအသက် ၄၀ ကျော်လာရင် သတိပြုရတော့မယ့် ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အာဖရိကန်-ကာရေဘီယန် လူမျိုးတွေ နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှလူမျိုးတွေမှာတော့ အသက် ၂၅ နှစ်ကျော်တာနဲ့ ဆီးချိုရှိနေလားဆိုတာကို သတိထားသင့်နေပြီလုိ့ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆီးချို ရောဂါခံစားနေရသူအများအပြားရှိနေတာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့်
By tayzar|2018-06-27T14:41:38+00:00June 27th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆီးချိုဆိုတာ ဒါမျိုးလား? ယနေ့ စနေနေ့မို့ ဆေးခန်းကို စောစောလာသော ဒေါက်တာစု တစ်ယောက် ဝင်လာသည်နှင့် မျက်မှန်းတန်းမိသော ပြနေကြလူနာတစ်ယောက်နှင့် ဘေးမှာခြေထောက်ပတ်တီးနှင့်လူနာတစ်ယောက်တွေ့လိုက်ရသည် "အမ လာလာဝင်ခဲ့" "ဆရာမရေ ကျွန်မအမလေ တောကလာတာ ခုဆီးချိုတွေတက်နေလို့"...... လူနာကုတင်ပေါ်ရောက်၍ ဆီးချိုဖောက်ကြည့်လိုက်တော့ ၄၀၀ကျော်!လူနာ မပြောပေမဲ့ ဆရာဝန် ဗီဇမို့ မနေနိုင်မေးလိုက်မိသည်..... "အမ ခြေထောက်က ဘာဖြစ်တာလဲ?" "အရေကြည်ဖုလေး ပေါက်ထွက်ပြီး အနာဖြစ်တာ ဆရာမ ၁ လလောက်ရှိပီ" "ဟယ် တစ်လတောင်ရှိပီလား? ပြပါဦးကြည့်ရအောင်?"" ပတ်တီးဖြေကြည့်ပီး တွေ့လိုက်ရသည်မှာ နီရဲယောင်ကိုင်းနေသော ခြေဖမိုး၊ ခြေဖဝါးကိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့ လက်တစ်ဆစ်ခန့် အနာဝတွင် ဂွမ်း၊အမဲရောင် အမှုန့်သိပ်ထားသည်။ "အမရေ အနာက
Sight Threatening Diabetes
By tayzar|2018-06-27T14:15:50+00:00June 27th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
အမြင်အာရုံကို ခြိမ်းခြောက်နေသော ဆီးချို ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များ သတိမမူမိသော ဆီးချို၏ နောက်ဆက်တွဲ မှာ မျက်စိမှုန်ခြင်း၊ရေတိမ်ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါသည် မျက်စိအတွင်းရှိ သွေးကြောများကို ယောင်ယမ်းစေ၍ မျက်လုံးအိမ်အတွင်း မကောင်းသော အရည်များစု၍ အမြင်အာရုံထိခိုက်စေသည်။ အများစုမှာရောဂါအစတွင်ထူးခြားလက္ခဏာမပြပါ ၊ လက္ခဏာပြသော အချိန်တွင်မူ အမြင်အာရုံထိခိုက်ပြီး ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ သတိထားသင့်သောလက္ခဏာမျးမှာ (၁) မိမိ အမြင်အာရုံ မြင်ကွင်းအတွင်းတွင် အဖတ်များ လွှင့်မျောလာသည်ဟုခံစားရခြင်း (၂) အမြင်အာရုံဝါးလာခြင်း (၃) အမြင်အာရုံ မြင်ကွင်း တစ်နေရာတွင် အမဲရောင် အကွက် မြင်နေရခြင်း (၄) အရောင်များမသဲကွဲခြင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များသည် အမြင်အာရုံ
By tayzar|2018-06-25T11:51:36+00:00June 25th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆီးချိုနှီးနွယ်ခြေထောက်ရောဂါ ဆီးချိုရောဂါလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ insulin ထိုးရတာ၊ အမြင်မှုန်ဝါးလာတာ၊ သွေးတိုး၊ လေဖြတ် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ၊ ခြေထောက်မှာအနာဖြစ်တာ စသည်ဖြင့် နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကို တသီတတန်းကြီး ပြေးမြင်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေထဲကမှ အများစုက ခြေထောက်ဖြတ်ရမှာကို ပိုပြီးစိုးရိမ်ကြပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့်သွေးထဲမှာ အချိုဓာတ်အရမ်းများတာလို့ သိထားကြပေမယ့် တခြားလက္ခဏာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင် သွေးထဲမှာအချိုဓာတ်များလာရင် သွေးကြောမျှင်လေးတွေမှာ အနာတရဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီသွေးကြောလေးတွေ ယောင်ရမ်းရာက သူတို့တာဝန်ယူပြီး ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အာရုံကြောမျှင်လေးတွေပါ အားနည်းတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအာရုံကြောတွေထိခိုက်လာပြီးဆိုရင်တော့ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ ကျိန်စာဆိုးလို့တင်စားရမယ့် ခြေထောက်ရောဂါ စပါတော့တယ်။ အရင်ဆုံး အာရုံကြောတွေထိခိုက်လာလို့ ပူတာ၊ အေးတာ၊ နာတာ၊ ထုံတာတွေ၊ အာရုံခံစားမှုတွေ လျော့နည်းလာပါတယ်။ ခလုတ်တိုက်တာ၊ ဓားရှတာ၊
Diabetes and Renal Problem
By tayzar|2018-06-21T13:22:58+00:00June 21st, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆီးချိုရောဂါနှင့်ကျောက်ကပ်အန္တရာယ် ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တိုင်း ကြောက်ကြသော ဆီးချို၏ နောက်ဆက်တွဲမှာ ဆီးချိုကြောင့် ကျေက်ကပ် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆီးချို၏ သွေးကြောပျက်စီးစေသော အကျိုးဆက်က ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဆီးချိုနှင့် သွေးတိုး၊ သွေးတွင်းအဆီများခြင်းရောဂါများ ပူးတွဲဖြစ်လျှငိ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှု ပိုမိုဖြစ်မိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖော်ပြပါလက္ခဏာများမှာ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကို ညွှန်းပြပါသည်။ (၁) မျက်လုံးဝန်းကျင်နှင့်ခြေထောက်များ ဖောယောင်လာခြင်း (အထူးသဖြင့် နံနက်ပိုင်း) (၂)ပါးစပ်ပျက်ခြင်း၊ပျို့အန်ခြင်း၊ကျို့ထိုးခြင်း (၃)ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှု အစပိုင်းတွင် ဆီးသွားများခြင်း၊ ညဘက်ဆီးသွားခြင်း နောက်ပိုင်းတွင် ဆီးနည်းခြင်း (၄) ဖြူဖျော့၍ သွေးအားနည်းခြင်း (၅)မောခြင်း၊အဆုတ်တွင်းရေဝင်ခြင်း (၆) အသားရောင် ညိုညစ်လာခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်သည်များမှာ ?ဆီးစစ်ခြင်း ဆီးထဲတွင် အသားဓာတ်( Albumin)ကို
By tayzar|2018-06-20T14:15:41+00:00June 20th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆီးချိုသမားတွေရဲ့လက်စွဲ metformin ဟာကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သလား? Metformin ဆိုတဲ့ဆေးဟာ ဆီးချိုရောဂါကုသရာမှာအသုံးများဆုံးဆေးဖြစ်ပြီး လူနာများပါရင်းနှီးနေတဲ့ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆီးချိုထိန်းရာမှာ အသုံးဝင်လှတဲ့ metformin ဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ချို့လည်း ရှိနေပါတယ်။အစာမကြေတာ လေပွတာ ကြွက်သားနာကျင်တာလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်သလို ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ ထိခိုက်စေနိုင်တာလဲ? Metformin ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Lactic acid ပမာဏကုိုမြင့်မားစေပါတယ်။ Lactic acid တွေစုပုံလာခြင်းဟာ ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပျက်စီးစေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်တာပိုဆိုးနိုင်သလဲ? ကျောက်ကပ်ရဲ့ မူလလုပ်ငန်းဆောင်တာမကောင်းသူတွေ အသက်ကြီးသူတွေ နဲ့ ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်နဲ့အန်တာလို ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတဲ့အခြေအနေမျိူးတွေမှာ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်မှုပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို Metformin သောက်သုံးမှုကို ရပ်ပစ်ရမှာလား? Metformin ဟာ ဆီးချို ထိန်းတဲ့နေရာမှာ ရှေ့ပြေးနေဆဲဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုမရှိသေးတဲ့
By tayzar|2018-06-18T13:43:51+00:00June 18th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆီးချို နဲ့ ထုံကျင်နာ ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေမှာ ခြေထိပ်၊လက်ထိပ်တွေ ထုံတာ၊ကျင်တာတွေ ဖြစ်တတ်တာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ဒီလို ဖြစ်ရတာဟာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်ပြီး သွေးကြောနဲ့ အာရုံကြောလေးတွေ ပျက်စီးလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကြောနဲ့ အာရုံကြောအသေးဆုံးလေးတွေက စပြီးပျက်စီးလာတာကြောင့် ခြေထိပ်၊လက်ထိပ်လေးတွေကစပြီး ထုံတာ၊ကျင်တာ၊နာတာတွေ ဖြစ်လာရတာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် မိမိ နဲ့ မိမိဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာ ဆီးချိုဝေဒနာ ခံစားရသူရှိမယ်ဆိုရင် ခြေ​ချောင်း၊လက်ချောင်းလေးတွေကို ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ -နေ့စဉ် ခြေ​ချောင်း၊လက်ချောင်းလေးတွေမှာ အနာရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ -ခြေဗလာနဲ့ လမ်းလျှောက်ခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။ -ခြေသည်း၊လက်သည်းလေးတွေ ညှပ်ရာမှာ သေချာဂရုစိုက် ညှပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ -ခြေချောင်းလေးတွေ၊ခြေထိပ်လေးတွေမှာ အနာရှိရင် မပေါ့ပါနဲ့။ပိုးဝင်လွယ်တာကြောင့် နေ့စဉ်ဆေးထည့်ခြင်း ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ -တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက်ပါ။
4 Conditions that Can Increase Blood Glucose Level in Diabetics
By tayzar|2018-06-13T16:13:44+00:00June 13th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
" မမျှော်လင့်ဘဲ ဆီးချိုတက်စေသော အခြေအနေ(၄)ခု " ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဆီးချို(သွေးတွင်းသကြားဓာတ်) တက်စေနိုင်လဲ? ဆီးချိုတက်စေမယ့်အစားအစာတွေစားတဲ့အခါ၊ ဆီးချိုဆေးတွေ သေချာမသောက်သုံးတဲ့အခါမှာ ဆီးချိုတက်တတ်တယ်ဆိုတာကတော့ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ သို့သော် ဒီနှစ်ချက်အပြင် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆီးချိုတက်စေတတ်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်းရှိတတ်တာမို့ သတိထားနိုင်စေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (1) ဖျားနာနေတဲ့အချိန် အအေးမိ၊တုပ်ကွေး စသဖြင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဖျားနာနေတဲ့အခါမျိုးမှာ အစားလည်းထိန်း၊ဆေးလည်းသောက်ပါလျက်နဲ့ ဆီးချိုတက်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တစ်ယောက် ဖျားနာနေပြီဆိုပါက အဖျားရောဂါပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ဆီးချိုကိုပုံမှန်စစ်နေကျအကြိမ်ရေထက် ၃ကြိမ်မှ၎ကြိမ်အထိ အခေါက်ရေတိုးစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဆီးချိုဝေဒရှင်တစ်ဦး ဖျားနာနေပြီဆိုပါက မိမိဘာသာကြိတ်ကုခြင်း၊ စပ်ဆေးများဝယ်သောက်ခြင်းက အလွန်အန္တရာယ်များတာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့သာ စနစ်တကျသွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။ (2)အိပ်ရေးပျက်ခြင်း အရွယ်ရောက်ပြီးလူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံးအိပ်ချိန် ၈ နာရီရှိရပါမယ်။ ဒါ့ထက်လျော့နည်းပြီး
Role of diet and drug compliance in Diabetes
By tayzar|2018-06-12T09:52:17+00:00June 12th, 2018|Categories: All Articles, ဆီးချိရောဂါ, အထွေထွေရောဂါများ|
ကျန်းမာတဲ့စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ဆေးမှန်မှန်သောက်ပြီး ဆီးချို ထိန်းကြမယ်! ဆီးချို ရောဂါဟာ မကူးစက်တတ်တဲ့နာတာရှည်ရောဂါတွေထဲမှာ အဖြစ်များဆုံးနဲ့ နောက်ဆက်တွဲအများဆုံးရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆီးချိုဖြစ်တဲ့အသက်အရွယ်တဖြည်းဖြည်းငယ်လာတာနဲ့အတူ ဆီးချိုဖြစ်တဲ့လူနာဦးရေလည်း တဖြည်းဖြည်းတိုးလို့နေပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါကို ဘာလို့ကြောက်ကြတာလဲ? ဆီးချိုကိုအလွယ်နားလည်အောင်ပြောရရင် သွေးထဲမှာအချိုဓာတ်များနေတဲ့ရောဂါပါ။သွေးထဲမှာအချိုဓာတ်များတာဟာ အန္တရာယ်ရှိသလားဆိုရင် ရှိပါတယ်လို့ဖြေရပါမယ်။ဆီးချိုဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နေရာကိုအဓိကထိသလဲမေးရင် တစ်ကိုယ်လုံးကိုတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားဖူးမြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ဆီးချိုကြောင့် မျက်လုံးကွယ်တာ ခြေထောက်ဖြတ်ရတာ ကျောက်ကပ်မကောင်းတော့တာ နှလုံးရောဂါ လေဖြတ်တာနဲ့ အာရုံကြောတွေထိခိုက်တာကနေ အချိန်မတိုင်ခင်သေဆုံးသည်အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးတွေဟာဆီးချိုကိုထိန်းဖို့ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ? အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ ရောဂါတွေကို မခံစားချင်ရင် မျှတတဲ့စားသောက်မှုပုံစံရှိအောင် ဂရုစိုက်ရမယ့်အပြင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေးကိုလည်း ပုံမှန်စွဲစွဲမြဲမြဲသောက်ရပါမယ်။ ဆီးချိုအစားအသောက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတွေကနှာခေါင်းရှုံ့တတ်ကြပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အာသီသတွေကို အလွန်အမင်းချိုးနှိမ်ရမယ်။ထမင်းလုံးဝမစားရဘူး။လျှာပေါ်တင်လို့ချိုတာမှန်သမျှမစားသင့်ဘူး။ဆီးချိုသမားအတွက်သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ဖြည့်စွက်စာတွေကိုပဲစားရမယ် စတဲ့အယူအဆမှားတွေကိုခေါင်းထဲကထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဆီးချိုသမားစားသင့်တဲ့အစားအသောက်ဟာ လူတိုင်းစားသင့်တဲ့အစားအသောက်ပုံစံအမှန်ပါပဲ။အစာအုပ်စုသုံးခုစလုံးမျှတစွာ ပါဝင်ပြီးအဓိကအားဖြင့်အချက်နှစ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီရပါမယ်။တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့အာဟာရကိုပြည့်မီရမယ့်အပြင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုလည်း ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့စားသောက်မှုပုံစံဖြစ်ရပါမယ်။ကိုယ်ဘာစားနေသလဲ ပမာဏကဘယ်လောက်လဲအမြဲချိန်ညှိနေရပါမယ်။စားသောက်ကုန်တွေမှာပါတဲ့ အဆီပါဝင်မှုနှုန်း ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနှုန်းကိုလည်း အမြဲစစ်ဆေးတတ်တဲ့အကျင့်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ယခင်ကတော့ ဆီးချိုအစားအသောက်မှာ carbohydrate